उपत्यकाका सीडीओ बाट आयो लकडाउन बारेमा यस्तो सूचना ! - jagritikhabar.com
उपत्यकाका सीडीओ बाट आयो लकडाउन बारेमा यस्तो सूचना !
उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुले लकडाउन हुने हल्लाको पछाडि नलाग्न नागरिकहरुलाई आग्रह गरेका छन्। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले तीनवटै जिल्लाका सीडिओहरुको बैठक नबसेको र तत्कालै कुनै लकडाउन घोषणा गर्ने तयारी नरहेको बताएका हुन्।
संक्रमण बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन हुने हल्ला व्यापक रुपमा फैलिएको छ। आइतबार थप ११ सय ६७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ
संक्रमणका कारण २ जनाले ज्या’न पनि गु’माएका छन्। दैनिक रुपमा संक्रमित हुने ग्राफ उकालो लागेसँगै पुन: लकडाउन हुने हो कि भन्ने हल्ला चलेको छ।
‘लकडाउन वा अन्य निर्णय गर्न कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। उक्त बैठक हालसम्म बसेको कुनै जानकारी छैन। त्यसैले हामीले लकडाउन गर्ने तयारी पनि गरेका छैनौं,’ उनले भने।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले पनि हालसम्म लकडाउनको कुनै कार्यक्रम नरहेको बताए। लकडाउन वा निषेधाज्ञाको निर्णय सीसीएमसीको र उपत्यकाका तीन जिल्लाका सीडिओको बैठकपछि मात्र हुने उनले बताए।